နာရီ Wallpaper ဟာ android များအတွက်နေထိုင်ကြသည် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » တိုက်ရိုက်နောက်ခံများ » နာရီ Wallpaper နထေိုငျ
နာရီ Wallpaper APK ကိုအသကျရှငျ
သင်တစ်ဦးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ရှင်မထင်မှတ်သောဖြစ်ကြပြီးသင်နောက်ဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာရန်ကိုချစ်လျှင်သင့်ကိုယ်ပိုင်တိုက်ရိုက်နာရီ Wallpaper ရ! ဒါဟာမဆိုမိုဘိုင်း device ကိုအနုပညာ gadget ကတစ်ပြည်နယ်စေမည်ကြောင်းကိုသင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကနာရီကိုခင်းကျင်းပြသစဉ်အမြဲရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖုန်းများအဘို့ဤအေးမြ app ကိုအလွန်အသုံးဝင်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းစတိုင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံသို့အဟောင်း home screen ကနောက်ခံဖွင့်ဖို့စိတ်ကူးလမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ ရုံသင်တို့အဘို့ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းခေတ်မှီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံနှင့်သင့်လက်ပတ်နာရီများအတွက်မြို့ပြအရေခွံတစ်ကြီးမားအစုံ, မှတစ်ဆင့်နှင့်အရသာနှင့်အတူရှာဖွေပါ! တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ၏သင်အကြိုက်ဆုံး device ကိုတဦးတည်း Make တာဝန်ခံအခမဲ့တိုက်ရိုက်နာရီ Wallpaper ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးနေ့တိုင်းရွေ့လျားနေသောနောက်ခံနှင့်အတူသစ်တစ်ခုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော Analog စလက်ပတ်နာရီရှိသည်!
✔သင့် screen အားလုံးကိုနောက်ခံပုံများနှင့်နောက်ခံအထဲက Check!
✔သင့်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ပတ်နာရီနှင့်အတူ Sync ကိုက!
✔ဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင် "တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနာရီ" ဒီဇိုင်း!
✔တစ်နောက်ခံ, လက်, သံတစ်ချက်နဲ့ widget ကစတိုင်များကိုရွေးချယ်ပါ!
✔တစ်ဦးချင်းစီဒြပ်စင်ပေါင်းစပ်၏ preview ကိုကြည့်ရှုပါ!
သင်ပြုသောအနေတဲ့အခါမှာ✔, သင့်စက်ကိရိယာနှင့် app ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်!
✔ဒီ display ကို, မယ့်နောက်ခံပုံများအပေါ်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်နာရီပါ!
သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်အောက်မှာ✔, သုံးစွဲဖို့ရိုးရှင်းသော configure ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ကြီးမြတ်ရူပ!
သင့်ရဲ့ဖုန်းအသစ် personalization program နဲ့အတော်ကြာလက်ပတ်နာရီအရေခွံနှင့်သင့်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet မျက်စိကိုများအတွက်အမှန်တကယ်အားရစရာစေမည်ကြောင်းကြော့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများသွားပါ။ ဒီအသုံးဝင်သော gadget ကနှင့်အတူသင့်ရဲ့ device ခေတ်မှီနှင့်စတိုင် Make နှင့်သင်မကြာမီကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်မည်သို့ပြုလုပ်မပါဘဲအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်အံ့သြတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်နာများအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအများအပြား "နာရီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဝေါလ်ပေပါ" စတိုင်များအပြင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Analog စနာရီ customize နှင့်သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အလိုဆန္ဒများအတိုင်းဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည့်အတွက်နည်းလမ်းများစွာလည်းရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦး "screen ပေါ်မှာနာရီ" ချင်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလက်ပတ်နာရီကိုမျက်နှာရှိခြင်း၏စိတ်ကူးကဲ့သို့သင်တို့နေ့တိုင်းကြည့်ရှုလျှင်အခမဲ့ "တိုက်ရိုက်နာရီ Wallpaper" get နှင့်ယခုသင့် display ကိုအပေါ်တစ်ဦးခေတ်မှီသစ်ကိုလက်ပတ်နာရီရှိသည်!
က "နာရီ app ကို" အိမ်မျက်နှာပြင်များအတွက် Download နှင့်ခင်းကျင်းပြသသင့်ကိုယ်ပိုင်လက်ပတ်နာရီကိုဒီဇိုင်း! သင်အလိုရှိအတိုင်းဤအခမဲ့ app ကိုနှင့်အတူသငျသညျအဖြစ်အများအပြားထူးခြားတဲ့အရေခွံတည်ဆောက်နိုင်! ဒါဟာခေတ်မီဒီဇိုင်းတွေနဲ့လှပတဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများပေါ်လျှင်ထို့ပြင် "အစဉ်အမြဲ display ကိုနာရီပေါ်တွင်" ပိုပြီးနှစ်သက်ဖွယ်ကြည့်ရှုမည်။ သငျသညျဖုန်းကိုစိတ်ကြိုက်များအတွက်အကောင်းဆုံး app ကို install လုပ်သည့်အခါကလှပသောနောက်ခံနှင့်သင့် display ကိုအပေါ် Analog စလက်ပတ်နာရီများအတွက်အေး "နာရီကို themes များ" ၏မျိုးစုံနှင့်တကွကြွလာသောကွောငျ့သငျသညျစိတျပကျြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ခေတ်သစ်နာရီဒီဇိုင်းကို "အဟောင်းနာရီ" စတိုင်နှင့်အတူ fused နှင့်ရလဒ်သင် wow ဆိုသညျကားစေမည်သည့် Analog စအချိန် Teller ပါ! လုံးဝအခမဲ့တိုက်ရိုက်နာရီ Wallpaper Get နှင့်ဒုတိယအားဖြင့်ဒုတိယဖြတ်သန်းအချိန်ကိုခံစား!
သင့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာအဟောင်းဒစ်ဂျစ်တယ်နာရီတွေကိုဖယ်ရှားဖို့နှင့်တိုက်ရိုက် Analog စနာရီနှင့်ဝေါလ်ပေပါရနှင့်၎င်း၏ရိုးရှင်းသောကြည့်ပျော်မွေ့ Get ။ ဒါကဖုန်းကို app ကိုသငျသညျကွဲပြားခြားနားသောလက်ပတ်နာရီစတိုင်များတို့နှင့်ကြီးသော "နောက်ခံပုံများနှင့်နောက်ခံ" နှင့်သင်၏တက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းစိတ်ကြိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခေတ်မီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများနှင့်အတူသင့်မိုဘိုင်းအလှဆင်နှင့်လက်တွေ့နှင့်စတိုင်နှစ်မျိုးလုံးသော "ကြီးမားသောနာရီ display ကို" ထည့်ပါ။ သငျသညျသွားလေရာရာ၌သင်တို့ကိုအချိန်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့နှငျ့အတူရိုးရှင်းသောနာရီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံ apk နှင့်ထပ်တူပြုခြင်းနာရီရဖို့သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်း။ တစ်စုံတစ်ဦးကအချိန်ကိုရဲ့သင်သည်အဘယ်သို့တောင်းသည့်အခါယခုသင်ဂုဏ်ယူစွာသင်အကြိုက်ဆုံး gadget ကထဲကယူနိုင်ပြီးသူတို့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရွေ့လျားနေသောနောက်ခံပေါ်တွင်အံ့သြဖွယ်လက်ပတ်နာရီကိုမျက်နှာအရေခွံကိုမြင်သောအခါသူတို့ခြေကိုလူတိုင်းချွတ်ပွတ်ဆွဲပါ။ တိုက်ရိုက်နာရီ Wallpaper တာဝန်ခံအခမဲ့ Download လုပ်ကာအပြုံးနှင့်အတူသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကိုစတင်!
- App ကို optimized
- လာမယ့်တုံ့ပြန်ချက်ကိုစောင့်ရှောက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကို အသုံးပြု. အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
နာရီ Wallpaper နထေိုငျ
8.12 ကို MB
Thalia ပရီမီယံဓာတ်ပုံ Montage
analog နာရီ & ...
analog နာရီ - ...